टेक्नोराटी रैंक वर्डप्रेस प्लगइन संस्करण २.०..2.0.4 रिलिज गरियो Martech Zone
आइतवार, अप्रिल २,, २०१। मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मैले (अन्तमा) सँग एक मुद्दा सुधार गरेको छु टेक्नोराटी रैंक वर्डप्रेस प्लगइन क्यास फाईल लेख्न वा खोल्न असमर्थतासँग मुद्दा सुधार गर्दछ। मैले प्लगइनमा क्यास सबडाइरेक्टरी जोडेको छु र अब त्यो डाइरेक्टरीमा क्यास फाइल भण्डार गरें।
प्लगइनलाई अझै पनि PHP5 + आवश्यक छ (सिम्पल एक्सएमएल) र घुमाउरो पुस्तकालय यदि तपाईंको होस्टसँग सबैभन्दा नयाँ र ठूलो छैन भने, म तपाईंलाई नयाँ होस्ट अपग्रेड गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। तपाईंलेaको लागि कुपन भेट्टाउनुहुनेछ नि: शुल्क वर्ष मा मेरो होस्टको साथ होस्टिंग को मेरो RSS feed.
थप रूपमा, म थप ग्राफिक्स शैलीको साथ यो प्लगइन बृद्धि गर्न काम गर्दैछु (धन्यवाद टेक्नोराटी त्यहाँ केहि मद्दतको लागि!)। मेरो सबै खाली समय मा - अवश्य!
अप्रिल 22, 2007 मा 3: 48 PM
मैले भर्खर तपाईको ब्लग मेरो फेवमा जोडें।
मेरो टेक्नोराटि प्रयोगकर्तानाम गेभिनो हो।
तपाईं यो लिंक क्लिक गरेर आफ्नो मनपर्नेमा मेरो ब्लग थप्न सक्नुहुन्छ।
अप्रिल 23, 2007 मा 4: 44 PM
तपाईं म मूर्ख जस्तो लाग्न सक्छ तर म एक आईटी व्यक्ति छैन।
मैले टेक्नोराटी रैंक प्लगइन स्थापना गरें तर मैले यो सन्देश पाउँदैछु।
म कहाँ गलत हुन गइरहेको छु मलाई भन्न सक्षम हुनेछ?
अप्रिल 23, 2007 मा 5: 02 PM
कुनै chinam मा मूर्ख छैन! प्लगइनले परिणामहरूको प्रतिलिपि डाइरेक्टरीमा लेख्दछ ताकि यसले प्रत्येक पटक टेक्नोराटीलाई सम्पर्क गर्नुपर्दैन। यसलाई 'क्यासिंग' भनिन्छ। यस केसमा, यस्तो देखिन्छ कि प्लगइनसँग प्लगइन / क्यास डाइरेक्टरीमा लेख्न उचित अनुमति छैन। यदि तपाईं त्यो डाइरेक्टरीमा अनुमतिहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई पूर्ण अनुमति हुनको लागि परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्दछ (CHMOD 777 XNUMX)।
अप्रिल 28, 2007 मा 8: 03 एएम
तपाईको WP प्लगइनका लागि धन्यबाद, डगलस। मैले प्रशासक ईन्टरफेसमा एउटा सानो बग फेला पारे जुन तपाईंले सायद सुधार गर्नुपर्दछ: क्यास चयन बाकस ठीकसँग काम गरिरहेको छैन। यो तपाईंको रेखाको कारण हो:
यदि (($ wptr_hours == "” ") || ($ wptr_hours =" "))
प्रिसेट नभएको खण्डमा चयन सेट गर्न। म पक्का छु कि तपाईलाई दोस्रो केसमा 'तुलना' चाहिएको देख्न सक्नुहुन्छ, एक 'असाइनमेन्ट' होइन – जसले $ wptr_hours को मान झिक्दछ, त्यसैले यसले कुनै पनि विकल्पहरू चयन गर्दैन र तपाईं '१ सँग अन्त हुन्छ। ' पूर्वनिर्धारित। आशा छ यसले सहयोग गर्दछ!
अप्रिल 28, 2007 मा 10: 16 एएम
डेन फेला पार्नुभएकोमा धन्यवाद! मैले परिमार्जन गरेको छु र v ०.०. uploaded अपलोड गरेको छु।
यदि (($ wptr_hours ==???) || ($ wptr_hours === null))
यसको मोल गर्नुहोस्!
यस प्लगइन डगलस को लागी धन्यवाद।
मँ तपाईको ब्लगको टेक्नोराटीमा गोज स्थिति भएको देख्न सक्छु। यसलाई जारी राख्नुहोस्!